मान्छे रहुञ्जेल कविता रहिरहन्छ | NepalDut
भाद्र २८ गते २०७६
लकडाउनमा निरन्तर बजार अनुगमन
मान्छे रहुञ्जेल कविता रहिरहन्छ
बालिका थपलिया बहु विधामा कलम चलाउँछिन् । अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर उनी कथा, कविता, गजल, गीत, निबन्ध जस्ता विधामा क्रियाशील छन् । पत्रपत्रिकामा समसामयिक लेख र समीक्षा पनि उनी लेख्छिन् । हेलेन केलर र नेल्सन मन्डेलाका जीवनी नेपालीमा अनुदीत गरिसकेकी उनको पहिलो कविता सञ्चयन प्रणयपथ हालै बजारमा आएको छ । सोही कृतिकै सेरोफेरो थपलियासँगको संवाद :
प्रणयपथमा यात्रा गर्दा पाठकले के पाउ“छन्?
मानवता, देशप्रेम, प्रकृतिप्रेम, जीवन दर्शन, समाज र नारी पुरुषको प्रेमको बारेमा साक्षात्कार गर्न पाउ“छन् । भावनाको संवेदनशील बाटो हो प्रणयपथ । कसरी यात्रा गर्ने, यो त पाठकले नै तय गर्नुपर्छ ।
कविता धेरै लेखिने र कम पढिने विधामा पर्छ अचेल । यहा“को कविता मोहचाहिँ किन?
राम्रो लेख्न सकेमा कविताको जहिल्यै पनि महत्व छ । मेरो विचारमा कविताले नै अन्य विधालाई दिशानिर्देश गर्छ । त्यसैले मभित्र कविताप्रति मोह जागेको हो । संसारमा मान्छे रहुञ्जेल कविताको अस्तित्व रहिरहन्छ ।
अखवारी लेखन, समीक्षा, अनुवाद र साहित्य कुनमा बढी आनन्द लाग्छ ?
सबैमा फरक फरक किसिमको आनन्द छ । म समसामयिक विषयमा अर्थात गैर आख्यानमा पनि कलम चलाउन मन पराउ“छु । समाजमा घटिरहेका घटनाको विश्लेषण गरेर पाठकलाई सन्देश दिन चाहन्छु । समीक्षा लेखनले कुनै राम्रो कृतिको प्रचारप्रसार गर्नमा सहयोग गर्छ । त्यसैले यसमा पनि आत्मसन्तुष्टि छ । राम्रो कृति अनुवाद गर्न पाउ“दा सर्वससाधारण पाठकले पनि ज्ञान लिने अवसर प्राप्त गर्दछन् । त्यस्तै साहित्य त मेरो जीवनसाथी नै हो । आनन्द नआउने सबालै भएन् ।
नेपाली कवितामा अनेक भाव, विषयवस्तु समेटिएका छन् । खासमा कविताले समेटनुपर्ने विषयचाहिँ के हो जस्तो लाग्छ ?
कविता जीवन र प्रकृतिस“ग नजिक हुनुपर्छ । कविताले आत्माको भाषा बोल्नुपर्छ । कविता समावेशी हुनुपर्छ ।
एकल वाचन, महोत्सवहरु भइरहेका छन् । साहित्यबाटै बा“च्न सक्ने वातावरण बन्दै गएको हो ?
यस्ता अवसर लेखकको प्रगतिका निम्ति आधारस्तम्भ हुन् । आफनो सिर्जनाबाट लेखकले क्रमशः आर्थिक पाटोलाई पनि सुधार्ने अवसर पाइरहेका छन् । नेपालमा पनि लेखेर बा“च्ने माहोल बिस्तारै बन्दै छ ।
मेरो विचारमा कविताले नै अन्य विधालाई दिशानिर्देश गर्छ । त्यसैले मभित्र कविताप्रति मोह जागेको हो ।
अंग्रेजी साहित्य पढेर नेपाली साहित्य लेखन कस्तो भइरहेको छ?
अंग्रेजी साहित्य एकदम व्यापक छ । म आफूले यो साहित्य पढेर लिएको ज्ञानलाई नेपाली साहित्यमा फैलाउन चाहन्छु । अंग्रेजी साहित्यले मेरो लेखनलाई फराकिलो बनाएको छ ।
तपाईका अनुवादका दुई पुस्तक पनि प्रकाशित छन् । नेपाली साहित्यलाई विश्वका पाठकसामु पु¥याउन के गर्नुपर्ला ?
नेपाली साहित्यलाई विश्वसामु पु¥याउन राम्रा कृतिको अनुवाद गनुपर्छ । अनि प्रचारप्रसार गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले म अंग्रेजी कृतिलाई नेपालीमा र नेपाली कृतिलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गरिरहेकी छु ।
अन्त्यमा आफना पाठकलार्ई के भन्न चाहनुहुन्छ?
पाठक नै मेरो साहित्यिक यात्राका सहयात्री हुन् । मेरो प्रेरणा हुन् । त्यसैले मेरो यो प्रेमिल कविता संग्रह पढेर जीवनस“ग नजिक बन्नुस् भन्न चाहन्छु ।
हामी पाठकको रचनात्मक प्रतिक्रिया, कमेन्ट, सेयरको सराहना गर्दछौं । तर नेपालदुतमा प्रकाशित समाचार वा अन्य सामग्री जस्ताको तस्तै वा परिमार्जनसहित अन्य न्युज पोर्टलमा प्रकाशित नगर्न अनुरोध छ ।
माउण्ट अन्नपूर्ण स्कुलमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन
विश्वभर माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सन्त्रास नेपालमा अझ धेरै…
आफ्नो व्यवहारआफैलार्इ जहर भएको छ कोरोनाले घरभित्र पनि कहर भएको छ अरुमाथि…
मानव समाजको लागि अत्यन्तै चुनौतिका साथ पैदा भइरेकोको कोरोनाका कारणले लाखौँ लाख…
कविता : भूइँकुहिरो
छैनन् धेरै ठूला सपनाहरू छैनन्थप कुनै रहर र चाहनाहरू छैनन्जे जति प्राप्त…
विदेश रहेका नेपालीलाई पत्र : संक्रमण हुन नदिन यसो गर्नुस्
बिदेशमा रहनुभएका आदरणीय बुवाआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु , अहिले तपाईंहरू यो शताब्दीकै…
अमेरिकामा कोरोनाबाट फेरि नेपालीको मृत्यु
अमेरिकामा कोरोना संक्रमणका कारण अर्का नेपालीको मृत्यु भएको छ । कोरोना संक्रमणपछि…
बिदामा विद्यार्थीले सिक्ने सामान्य कुराहरु
विभिन्न अध्ययनले के भन्छन् भने लामो समयसम्म अध्ययन गरिरहनु पनि लामो समयको…
अस्पतालले भर्ना गरेनन्, वृद्धको ज्यान गयो
मुटुको अप्रेसन गरेका बिरामीलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि धनगढीका विभिन्न अस्पताल लगियो ।…
कविता : अब विभेद कसको ?
हिजो छुत अछुत मानवको हुन्थ्यो रगतको हुन्थ्यो कीराको हुन्नथ्यो गार्इको हुन्नथ्यो गोहीको…